स्कुल र कलेज ड्रेसमै रहेका विद्यार्थीलाई किन खोज्दैछ प्रहरी ? - Pradesh Dainik
स्कुल र कलेज ड्रेसमै रहेका विद्यार्थीलाई किन खोज्दैछ प्रहरी ?
धरान, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा हालै सरुवा भई आएका डिएसपी डुण्डीराज न्यौपानेले तीन दिनअघि पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रम राखेर विद्यालय वा कलेज ड्रेस (पोशाक) मा घुम्न जाने विद्यार्थीहरुलाई पनि कारबाही गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यही उद्घोषअनुसार सोमबार उनी फिल्डमा पनि उत्रिए ।
डिएसपी न्यौपानेले सोमबार धरानको वडा नं १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्लेसमेतको सहयोग लिएर सम्भावित ठाउँको अनुगमनमा निस्किए । धरानका युवायुवती तथा विद्यार्थीहरु वडा नं १३ र २० मा पर्ने झोलुंगे पुल क्षेत्रमा घुम्न, भेटघाट गर्न पुग्ने गर्छन् । कतिपय स्कुल, कलेज छोडेर नै त्यता गएका हुन्छन् । त्यसैले प्रहरी र वडा कार्यालयको टोलीले सो क्षेत्रमा अनुगमनमा पुगेको थियो ।
उनीहरुले स्थानीयबासीसँग छलफल गरि गरेका थिए । डिएसपी न्यौपाने, वडा अध्यक्ष काफ्ले, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख (इन्स्पेक्टर) होमराज दाहाल, धरान १३ अमरहाटस्थित प्रहरी बिटका असई सुमन दाहाल विद्यार्थी अनुगमनमा गएका थिए । घरबाट पढ्न भनेर हिडेका छोराछोरीहरु स्कुल वा कलेज जान छोडेर घुम्न निस्किएको बारेमा अभिभावकहरु अनभिज्ञ हुन्छन् । यस्तो बानी बढ्दै गएर उमेरमा नै विकृत्तितर्फ धकेलिने, गलत बाटोमा हिड्ने खतरा मात्र होइन, अश्लील क्रियाकलाप गर्दै गएको पनि भेटिने गरेको छ । पढ्नु पर्ने विद्यार्थीहरु यता स्कुल, कलेज छोडेर यता घुम्न आउछन्, अश्लील क्रियाकलाप पनि गर्छन्,ु अध्यक्ष काफ्ले भने, हामीले त पहिलादेखि नै यो अभियान गर्दै आएका छौ, अब प्रहरी प्रशासनको पनि सहयोगले थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
होटलको ढोकामा राखिएको पर्दा हटाइयो
अनुगमन टोलीले झोलुङ्गे पुल आसपासमा भएको होटलहरुको ढोकाबाट पर्दा हटाउन लगाएको छ । मुल ढोकामा राखिएको पर्दा हटाउन लगाइएको हो । समाजलाई शान्त राख्न र विकृति, विसंगतिबाट मुक्त बनाउन पनि यो अभियानकैरुपमा अघि बढाइएको डिएसपी न्यौपानेको भनाई छ । उनका अनुसार अब सिभिलमा पनि प्रहरी खटिनेछ । ‘धरानलाई विकृतिमुक्त बनाउने अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्छ,’ डिएसपी न्यौपानेले भने । उनका अनुसार फिल्म हल, सम्भावित ठाउँहरुमा नियमितरुपमा अनुगमन प्रहरीले गर्नेछ ।
समाचार श्रोत ः कपुरी न्यूज